Ogostino Mahiga oo booqday Puntland - BBC News Somali
Ogostino Mahiga oo booqday Puntland
Image caption Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sh Maxamed iyo Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Agostino mahiga
Wakiilka xogyaha guud ee Qaramada Midoobay ee Somaliya Ambasador Ogostino Mahiga, ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Garowe halkaas oo kula kulmay madaxwaynaha Puntland Cabdiraxman Sh.Maxameded iyo xubno ka tirsan golaha wasiirrada.
Booqashada wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay uu ku yimid Puntland, waxay ahayd mid la sugayay maalmihii la soo dhaafay, waxaa markii uu yimid Garowe lagu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada ee Garowe halkaas oo uu kula kulmay Madaxwaynaha Puntland iyo madax kale oo dawladda ka tirsan.
Madaxweynaha Puntland iyo safiirka oo kulankoodi ka dib warbaahinta la hadlay waxay wadajir u tibaaxeen inay si qoto dheerisula soo qaadeen arrimaha ka taagan guud ahaan Somaaliya , xiriirka dawladda federalka ee Somaliya iyo Puntland iyo arrimo kale oo iyana khuseeya gudaha Puntland.
Si gaara waxaa farta loogu fiiqay dhinaca la dagaallanka burcad-badeedka, iyo dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxayna sheegeen labada masuul in loo baahan yahay taakulo caalamku ka gayasto arrimaha gacanta u baahan ee horumarka Puntland la xiriira.
Ambasador Mahiga oo isagana su'aalo laga waydiyay ujeedada booqashada uu ku yimid Puntland iyo waxa uu ka kororsaday socdaalkiisa, ayaa tilmaamay in booqashadiisu ay salka ku hayso arrimo kala duwan oo isugu jira guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo tan gaar ahaaneed ee Puntland.
Wuxuu yiri: " waxaan u imid Puntland inaan arko dawladda Puntland dhamaan dhinacyada kala duwan ee dawladnimada, horumarka dhaqaalaha, iyo hormarka dhinaca nabadgelyada.
Waxaan kaloo halkan u imid inaan dhiirrigeliyo hoggaaminta, Puntland waxay durba u samaysay awood ay taas kaga qayb qaadato, waxaana filayaa inaan u baahanahay inaan cayaaro kaalintayda si aan dareenka caalamka ugu soo jeediyo Puntland, oo ah meel ay suuragal tahay in guul laga dhaliyo guushaas oo ah mid ay ku dayan karaan Soomaaliya inteeda kale.
Wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobay ambassador Mahiga, wuxuu kaloo tilmaamay in Puntland ay meesha ka saartay sawir ay ka haystaan dad badan isla markaasna ay muujisay in dad Soomaali ahi ay ku tallaabsan karaan dhismaha maamul ku dhisan sharci iyo kala dambayn la isku hallayn karo.
Safiirku wuxuu soo qaaday dagaalkii dhawaan ka dhacay degaanka Galgala, oo uu ku tilmaamay ka qaybgal buuxa oo uu maamulku ka gaystay dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro waxa uu ugu yeeray argigixisada caalamiga.